အချစ်: မာတင် Vrijland
မြွေ, Kundalini, အီဗာ, မေတ္တာနှင့်သစ္စာဉာဏ်အလင်း
အတွက် Filed အချစ်	by မာတင် Vrijland	ဇန်နဝါရီလ62016 အပေါ်	• 11 မှတ်ချက်
ဤဆောင်းပါး၏တစ်ဦးနားလည်မှုအဘို့အသငျသညျအခြို့သောဘာသာရေးအသိပညာရှိသည်အသုံးဝင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကကျမ်းစာထဲကဖန်တီးမှုဇာတ်လမ်းနားလည်ရန်အသုံးဝင်သည်။ အာဒံနဲ့ဧဝရဲ့ဇာတ်လမ်းကဒီမှာ [ ... ] တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအလင်း၌မြင်ရာမှဖွင့်မယ့်ဘာသာရေးဒဏ္ဍရီထက်ပိုမိုဖြစ်ပေါ်နေသည်
အတွက် Filed အချစ်	by မာတင် Vrijland	ဧပြီလ92015 အပေါ်	•7မှတ်ချက်
ကျမ်းစာထဲမှာမျိုးစုံအရေးအသားရှိပါတယ်။ ဒါဟာယခု ပို. ပို. လူတွေကိုကျနော်တို့ကယနေ့သတင်းနှင့်အတူကနှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်စတင်ကြောင်းစာအုပ်တစ်ဦးစုဆောင်းမှုဖြစ်၏ အားလုံးသတင်းအဓိကသတင်းအေဂျင်စီများအားဖြင့်ငါတို့ကိုအပ်သောသဘော။ ဥပမာ, သမ်မာကမျြးပေါငျးတို့သစာအုပ်တွေဟာအာဏာကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုအဖြစ်ကောင်းစွာတည်းဖြတ်။ ဟုတ်ပါတယ်, [ ... ]
အတွက် Filed အချစ်	by မာတင် Vrijland	ဧပြီလ42015 အပေါ်	•3မှတ်ချက်
က Man အဆက်မပြတ်ပျော်ရွှင်မှုကိုရှာနေခံရဖို့ပုံရသည်, သို့သော်ပျော်ရွှင်မှုကိုအတွက် insatiable ပုံရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မင်္ဂလာခံစားရမေတ္တာ၌ကျွန်ုပ်တို့၏နားအထိရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းအဘယ်အရာကိုဆုံးရှုံးကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ [ ... ] ကျနော်တို့ပိုက်ဆံကသာအများကြီးရရှိခဲ့ပါတယ်ပြီငါတို့သည်သင်တို့တတ်နိုင်သမျှတစ်ကောင်းတဲ့ကားကိုဝယ်နိုင်